Wararkii ugu dambeeyay duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada Dhexe & Xubno Al-Shabaab ah… – HalQaran.com
Wararkii ugu dambeeyay duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada Dhexe & Xubno Al-Shabaab ah…
J/Dhexe (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya, duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada Jilib oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe, waxa la sheegay in halkaasi lagula beegsaday xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Saraakiil Ciidan ayaa waxaa ay sheegeen in sigaar ah duqeynta loola beegsaday Sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo duqeyntaasi lagu dilay kaas oo ahaa Madaxa Amniga degmada Jilib ee Al-Shabaab.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in xilliga duqeynta ay dhaceysay ay jireen kulamo u socday Xubno ka tirsan Al-Shabaab, hayeeshee aysan jirin faah faahino rasmi ah oo laga bixiyay duqeymahaas.
Waxay aheyd, dhowr jeer oo hore ayaa diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka oo taageero ka helayo Ciidamada Dowladda Soomaaliya waxaa ay duqeymo ka fuliyeen degmada Jilib iyo degaano kale, waxaana Mareykanka uu sheegay in duqeymahaas uu ku dilay Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Tags: Al Shabaab, degmada Jilib, duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada Dhexe
Warbixin: Arrimaha la isku khilaafi karo ee shirka Muqdisho
DHAGEYSO: Xildhibaan Daahir Jeesow oo Farmaajo ka codsaday in la xiro Axmed Madoobe